के हो कोरोना भाइरस ? यस्ता छन् संकेत र बँच्ने उपाय – Naya Pusta
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ माघ २७, सोमबार १७:०३ [post-views]
बेइजिङ । चीनमा संक्रमणकै रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबारे विश्वकै ध्यान तानिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : काँग्रेसका नेता खड्काद्वारा सरकारको कोरोना राहत कोषमा ५ लाख सहयोग
ती नागरिक यही जनवरी १५ मा चीनको वुहानबाट फर्किएका थिए । स्वास्थ्य चेकजाँच गराउँदा उनलाई कोरोना लागेको कुरा विज्ञप्ति मार्फत २० जनवरीमा जानकारी गराइएको हो । यससँगै उत्तर कोरिया लगायत अन्य देशले यसबाट बच्न सीमा तथा विमानस्थलमा उच्च शतर्कता अपनाउन थालेका छन् ।
कुन राशिका लागि कस्तो छ प्रेम सम्बन्ध ? तपाईको राशि कुन हो ?